Kaamiroon oo Weerar ku Dishay Dagaal-yahanno ka tirsan Boko-Haram – Radio Daljir
Diseembar 3, 2015 10:44 b 0
Somalia, December 03, 2015-(Daljir)_Ciidamada dalka Cameron ayaa si awood ah kaga soo furtay kooxda Boko Haram ee Nigeria, kaddib howlgal ay ku dileen in ka badan 100-xubnood oo kooxdan Islaamiyiinta ah ka tirsan, sida ay shalay oo Arbaco ahayd shaacisay wasaaradda gaashaandhigga waddanka Cameroon.
Howlgalkan oo ka dhacay deegaan ku yaalla waqooyiga Cameroon, gaar ahaan deegaan ku dhow xadka ay la wadaagto Nigeria ayaa sidoo kale kooxda Boko Haram looga furtay hub iyo rasaas fara badan.
â€œMillateriga Cameroon waxay howlgal gaar ahaa oo socday intii u dhexeysa 26-kii – 28-kii bishii hore ee November, kaasoo ka dhan ahaa kooxda Boko Haram ee ku sugan xadka aan la wadaagno dalka Nigeria waxaa lagu dilay howl-galka boqol dagaalyahanada kooxda ah, waxaana looga sii-daayay 900 oo qof oo ay afduub ku haysteen,â€ ayaa lagu yiri warbixinta wasaaradda gaashaandhigga Cameroon.
Sidoo kale, waxay wasaaradu sheegtay in howlgalka ay qayb ka ahaayeen ciidanka dallaka Chad iyo Nigeria oo ay daris yihiin Camero0n. Laakiin laguma xusin warbixinta khasaare howl-galkan kasoo gaaray ciidamada is-bahaysanaya.
Kooxda Boko Haram oo ku biirtay sannadkan kooxda Islaamiga ah ee Daacish ayaa waxay Nigeria ka wadday dagaallo iyo qaraxyo lixdii sano ee lasoo dhaafay, waxayna ku baahisay colaaddeeda waddamada dariska la ah Nigeria.
Ugu dambeyn, laba qof oo ka tirsan kooxda Boko Haram ka tirsan yihiin ayaa habeenkii ay Salaasadu soo galaysay waxay qarax ka geysteen deegaanka Waza oo ku yaalla waqooyiga dalka Cameroon, kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan lix qof.
Beesha Caalamka oo Baaq wada jir ah ka soo saaray Colaadaha Gaalkacyo